﻿Komputermen peeji 1
The kọmputa reboots mgbe ị gbanye:-akpata na ngwọta nke nsogbu
akpali Computer ọrụ mgbe ezute mgbe ị na-atụgharị na ngwaọrụ ndị dị otú ahụ a nsogbu dị ka ọ bụ ihe na-adịghị agwụ agwụ reboot.
Windows Vista natara nkwado nke DirectX 11
Ugbua, uru ya nwere ike iri uru nke obi ụtọ nwe HD 5000 usoro ndịna-emeputa kaadị ndị ATI.
Ọ na-akwụsị laptọọpụ ihe na-eme?
Bara uru Ihe mere eziokwu ahụ bụ na laptọọpụ aghọwo budata iji nwayọọ, ọ bụ nnọọ iche iche.
Isi geymerskogo laptọọpụ Msi GT60 2PC
Nyocha The emelitere akara nke ọhụrụ nso nke Ịgba Cha Cha ji ede si Msi ụlọ ọrụ bụ a modernized version nke gara aga-emana laptọọpụ GT60.
Okomoko Asus Zenbook UX21 Rose Gold
Notebooks Olee ebe aka ịmụta ọhụrụ ụdị nke laptọọpụ?
Na laptọọpụ furu efu mgbaàmà wifi
The ulo atụmatụ ekwentị, na laptọọpụ na desktọpụ kọmputa.
Windows ga-agba ọsọ na ezinụlọ ngwa
Microsoft Company tọhapụrụ a preview version nke Windows n`ihi na n`ụlọ ngwa dị ka akụkụ nke ya atụmatụ ịbanye ekwe ahịa "Internet Ihe" (IoT), ebe sọọ mpi Android n`elu ikpo okwu na-ama nwere ike ọnụnọ.
Saịtị bụ a onwe collection nke ihe na n`anya informational na izi akụ. All ozi nwetara si n`ihu ọha na isi mmalite. Ndị nlekọta na-adịghị emetụta maka chepụtara nke ihe ji mee ihe. Ikike niile dịịrị ndị nwe ha